Ukuhlukaniswa kwe-mesh yokwandisa insimbi
Material: low carbon steel plate, aluminium plate, insimbi engagqwali plate, titanium plate, njll.
Uhlobo lokudlula: idayimane, i-hexagonal, iyindilinga, enomumo okhethekile, njll.
Ukwelashwa okungaphezulu: ukufafaza upende ovimbela ukubola, i-galvanizing eshisayo kanye nokucwiliswa kwepulasitiki.
Usayizi: ububanzi bungaphakathi kwe-2m, futhi ubude benziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Inqubo yokwakha yesilingi esinwetshiwe sensimbi: hlwitha umugqa ovundlile wokuphakama → hlukanisa umugqa wokugreda we-keel → faka i-keel suspender → faka i-keel eyinhloko → faka i-keel engumsizi → faka inethi enwetshiwe yensimbi → hlanza indawo.
Izici ezithile ze-mesh yokwandisa insimbi zimi kanje
1. I-mesh surface ilula, isobala, inokuthula, inombala ocebile, kulula ukwakha futhi iphansi ngezindleko.
2. Umbono usobala futhi uvulekile, ovumela ukuqeda nokushisa, futhi akuphazamisi ukukhanya kwemini nokukhipha umoya.
3. Umbala, ukucaciswa kanye nosayizi kungenziwa egcizelele ukuhlangabezana nezidingo ezihlukahlukene.
4. Uma isetshenziswa njenge-ceiling material, ingafaniswa ne-air conditioning emaphakathi, ukukhanya, isifutho nezinye izinsiza ukuze kusetshenziswe indawo ngempumelelo.
5. Izinto ze-aluminium alloy zingagaywa kabusha ngokuphelele, zivikeleke futhi zivikeleke endaweni ezungezile, nempilo ende yesevisi.
Okwedlule: Igumbi umhlobiso wangaphandle odongeni Laser usike ezibaziweyo isikrini metal
Olandelayo: Ukuhlobisa / ukwahlukanisa / kwekhethini le-Aluminium alloy chain mesh metal